Josie Scotchmer's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Josie Scotchmer
Josie Scotchmer ndiye Kushambadzira Manager pa Mailjet, email kushambadzira Uye transactionional email chikuva. Josie anofarira B2B2C Kushambadzira Manager ane nzira yekutengesa kushambadziro ekutaurirana.
Mugovera, October 28, 2017 Mugovera, October 28, 2017 Josie Scotchmer
Pedza zuva uchifamba uchikomberedza London, New York, Paris kana Barcelona, ​​muchokwadi, chero guta, uye iwe unenge uine chikonzero chekutenda kuti kana iwe usina kuigovana pasocial media, hazvina kuitika. Nekudaro, vatengi muUK neFrance vava kutaura nezveramangwana rakasiyana renhau rezvenhau zvachose. Tsvagiridzo inoratidza tarisiro yekusuwa kwema media enhau sezvo 14% chete yevatengi vane chivimbo chekuti Snapchat ichave ichiripo mumakore gumi.